အဆိုတော်ယုန်လေး သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အေးနေဝင်းရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက် - Lucky9
အဆိုတော်ယုန်လေး သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အေးနေဝင်းရဲ့ ဝေဖန်သုံးသပ်ချက်
by Thi Ha
Written by Thi Ha
အ ဆိုတော် ယုန်လေး သီချင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အေးနေဝင်း ရဲ့ ဝေဖန် သုံးသပ်ချက်
သုံး ရက်လောက်နေတော့ နည်းနည်း အနည်ထိုင်စပြုတော့မှ အခြေအနေ ရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်။ ဒီ ဗီဒီယိုထွက်လာပြီး အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုကြည့်ရင် ..
(၁) NLD ဖက်က ပေါင်းလက္ခဏာ ဆောင်တဲ့ အောင်မြင်မှုအရရှိဆုံးပဲ။ သူ့ပါတီကိုထောက်ခံသူတွေ အခု တစ်ချိန်တည်းမှာ အသံကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ထွက်လာတယ်။ အနုပညာရှင် အချို့ကပါ ဒီဗီဒီယိုကို ဝေဖန်ခံရတော့ သူတို့နောက်ကအားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကိုပါ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ ကြိုတင်စုစည်းပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ နောက်ပြီး နိုင်ငံတကာမှာ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ရဲ့ လုံခြုံရေးကို နှောက်ယှက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်သို့မဟုတ် ပုံရိပ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေရင် အဆိုပါခေါင်းဆောင်အပေါ်မှာ ကြည်ညိုမှု ကရုဏာ ဖြစ်စေတာ ထုံးစံပဲ။ ၁၉၈၁ ခုနှစ် မတ်လ (၃၀) ရက်နေ့မှာ အမေရိကန်သမ္မတ ရေဂင်ကို သေနတ်သမား ဂျွန် ဟင်ကလီက မအောင်မြင်သော လုပ်ကြံမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရာမှာ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုကို လူတွေမြင်ခွင့်ရလိုက်တယ်။ ဒီဗီယိုမထွက်ခင် သမ္မတရဲ့ ထောက်ခံမှုစစ်တမ်း ၆၀% ရှိရာကနေ ဗီဒီယိုထွက်လာပြီးတော့ ၆၉% အထိခုန်တက်သွားတယ်။ ဒါက တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာ၊ တကယ်မဟုတ်ဘဲ အနုပညာလှုပ်ရှား ဖန်တီးမှုအနေနှင့် သမ္မတ လေယာဉ်အပိုင်စီးတာတို့၊ အိမ်ဖြူတော် အသိမ်းခံရတာမျိုး ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်လည်း လက်ရှိသမ္မတအတွက် စည်းရုံးရေး အမြတ်ထွက်တာပဲ၊ ဒါကြောင့် ကလင်တန်လက်ထက်ရိုက်တဲ့ Air Force One မှာ သမ္မတဇာတ်ရုပ်ကို ကလင်တန်တို့ မိသားစုပုံမျိုးရိုက်တာ၊ အိုဘားမားလက်ထက်က ဇာတ်လမ်းတွဲ 24 မှာ သမ္မတ Wayne Palmer ကို အိုဘားမားနှင့် ရုပ်တူအောင် ထည့်ရိုက်တာလေ။
ဒါ တွေကြောင့် အကျိုးဖြစ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါကြောင့် သမ္မတတွေဟာ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်မှာ လုပ်ကြံဖို့ကြိုးစားခံရတဲ့ သူရဲကောင်း ဇတ်လမ်းမျိုး သိပ်ရိုက်စေချင်တာ။ အခုလည်း ဒီမှာ ဟိုနေ့က video ထွက်ပြီးတဲ့နောက် NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်း အတွက် တကယ်လည်း စည်းရုံးရေး အထောက်အကူဖြစ်သွားတာပဲ။ ပထမပိုင်း အကွက်မှာ စီးပွားရေး ရပ်ဆိုင်းလို့ အောက်ခြေလူကတန်းစားတွေ ထိခိုက်တာမျိုးရိုက်တာကြောင့် တကယ် ခံစားရသူတွေကြားမှာ NLD ပုံရိပ်ကို အထိုက်အလျောက် ထိခိုက်စေပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ ကရုဏာအပြည့်ပြန်ရလို့ အားလုံးခြုံကြည့်ရင် NLD အမြတ်အထွက်ဆုံးပဲ။ NLD က စီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ချက်ကြောင့် သက်တန်းငါးနှစ်အတွင်း အားမရစရာ ဖြစ်ခဲ့တာတွေကို ခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်နှင့် ပြန်ဆယ်ပြီး အခြေအနေကောင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတဲ့သဘော သိလိုက်ရတယ်
၂။ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဖက်ကကျတော့ အဂွမ်းဆုံးဖြစ်သွားတာ၊ အစည်းဝေးမှာ NLD အမတ်မင်းတွေရော၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အမတ်မင်းတွေရော တက်ရောက်ဆွေးနွေးပေမယ့် NLD အမတ်တွေကိုပဲ ပရိသတ်က သတိထားမိကြတာ၊ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို လူရာသွင်းပြီး ထည့်ကို အပြောမခံရတာ ပထမ ဂွမ်းချက်၊ နောက်ဆုံး ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဥက္ကဌ ဦးသန်းဌေးပုံထည့်လိုက်တာကကျတော့ ….. အိုး ဘာပြောကောင်းမလဲ။ ဤနေရာတွေ သေးပန်းပါလို့ ဆိုင်းဘုတ်ချိတ်ပေးလိုက်တာကျ နေတာပဲ၊ ဒီဗီဒီယိုကို မကြိုက်တဲ့သူတွေက ယုန်လေးပြီးရင် မို့မို့မြင့်အောင် ဒုတိယလိုက်ပြီး ဆဲကြလိမ့်မယ်လို့ ထင်တာ ဦးသန်းဌေးက သူလည်း ဝင်မရိုက်ရရှာဘဲ မမို့ရဲ့ နေရာဝင်ယူပြီး အဆဲခံပေးသွားတာ။ လှုပ်ရှားပြီး သရုပ်ဆောင်စရာတောင် မလိုဘူး။ ရုပ်သေ ဓါတ်ပုံလေးနှင့် အဆဲခံသရဖူ ဝင်လုသွားတာ။ “ထသွားမှ အကျိုးမှန်းသိ” လို့ဆိုရအောင်ကလည်း သူက ဖိုးပါချင်အဖြစ် ဝင်သရုပ်ဆောင် ရတာလည်း မဟုတ်ဘဲ ပိဋကတ်တော်ထဲပါတဲ့ လေထဲလွင့်လာတဲ့ ဗီဒီယိုတည်းဟူသော မီးကွင်းက ကောင်းကင်ပျံနေတဲ့ ကျီးကန်းတည်းဟူသော ခမျာ ဦးသန်းဌေး လည်ပင်းကို အကုသိုလ်အကျိုးပေးချိန်မို့ တည့်တည့်ကြီး တက်စွပ်မိတာ။ ယုန်လေးကိုချစ်ကြတဲ့၊ အားပေးကြတဲ့ မိတ်ဆွေပရိသတ်တွေပင်လျင် အခြားရိုက်ချက်တွေကို ယုန်လေးဖက်က ဝင်ကာကွယ်ပေးကြပေမယ့် ဦးသန်းဌေးပါထည့်လို့ အပြောခံရတာကိုကျတော့ ကာကွယ်ပေးစရာ ဆင်ခြေရှာမရခဲ့ဘူး။
ယုန်လေးက ဘယ်သူတိုက်တွန်းမှုမှ မပါဘဲ ရိုက်တယ်လို့ ရှင်းလိုက်ပြီ၊ တစ်ယောက်ယောက် တိုက်တွန်းမှုများပါလို့ တိုက်တွန်းသူက ပြည်ခိုင်ဖြိုးဖက်ကဆိုရင်တော့ ကိုယ့်သေတွင်းကိုတူးခဲ့ကြတာပဲလို့ တွေးခဲ့မိတာ ယုန်လေးရှင်းလိုက်လို့ မဟုတ်မှန်းသိရတာတော်သေးတယ်။ အစကတည်းက ပြည်ခိုင်ဖြိုးကို ဆန့်ကျင်ဖက်က သူခိုးပါတီလို့ စွပ်စွဲနေကြတာ။ တကယ်တော့ ခိုးတဲ့သူတွေ အများအပြား ပါကောင်းပါပေမယ်. တကယ်အရည်အချင်းပြည့်စုံသူတွေလည်း အများကြီးပါ။ သူတို့အောင်မြင်ချင်ရင် သူခိုးပုံရိပ်ကို ရှေ့တန်းမတင်ဘဲ၊ အရည်အချင်းရှိတဲ့ပုံရိပ်ကိုပွဲထုတ်ရမှာ၊ ဒီပါတီလည်း အခု ဗီဒီယိုကလှုပ်နှိုးလိုက်လို့ ကိုယ့်အဖြစ်ကိုယ်သိကြဖို့ကောင်းပြီ၊ ဘယ်လိုပုံရိပ်မျိုးပြောင်းလဲ ရှေ့တန်းတင်ရမယ်ဆိုတာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ကြတော့၊ ဒီအချိန်တောင် နှောင်းလွန်းပြီလားမသိ။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကျတော့ သူတို့အစိုးရ ငါးနှစ်သက်တမ်းအတွင်း အထိုက်အလျောက်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့ အနေအထား ကိုတောင် ခေါင်းဆောင်ပုံရိပ်ဂွမ်းနေမှုကြောင့် အတော်ကြီးရုန်းကန်ရဦးမှာ။
၃။ နောက်ဆုံး ရိုက်ခတ်မှုက အနုပညာကဏ္ဍ။ သူ့ရိုက်ထားတာကို ကြိုက်လို့ချီးမွမ်းတာ၊ မကြိုက်လို့ ဝေဖန်တာက သက်ဆိုင်ရာ ကာယကံရှင်တွေရဲ့ ပြောပိုင်ခွင့် လွတ်လပ်မှု။ ဒါပေမယ့် တော်တော်မျက်လုံးပြူးသွားမိတာက ဒီအထဲ ဝင်သရုပ်ဆောင်၊ သီဆိုခဲ့တဲ့ ကလေး တစ်ယောက်၊ နှစ်ယောက်ဆီက တိုက်ရိုက်ပြန်ကြားရတာ။ သူတို့ပြောတာက “လူတွေ စိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းဘူး။ line ပေါ် မတင် ခင် ရုပ်ရှင်ရုံမှာ အားလုံးစုကြည့်တဲ့အချိန်မှာ လက်ခုပ်တွေဝိုင်းတီးကြပီးတော့၊ အမှားဆိုပီးဖြစ်လာတော့မှ အချင်းချင်းတောင်ပြန်ကျုံးကြတယ် ” တဲ့။ အဲလို မတင်ခင် အမြည့်ကြည့်ခဲ့ဖူးသူတွေက နောက်မှ ပြန်ဖောင်းထုတဲ့အထဲပါတဲ့ သက်သေတွေ ပေါ်လာရင် သူတို့လည်း ဂွမ်းပြီနော်။ ဦးသန်းဌေးရေ.. အားမငယ်ပါနှင့်။ ဂွမ်းဖော် ဂွမ်းဖက်တွေ အဆဲခံသရဖူပြန်လုချင်လုသွားဦးမှာ။
From Aye Nay Win’s FB
အ ဆိုေတာ္ ယုန္ေလး သီခ်င္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ေအးေနဝင္း ရဲ႕ ေဝဖန္ သံုးသပ္ခ်က္
သုံး ရက္​ေလာက္​​​ေန​ေတာ့ နည္းနည္း အနည္ထိုင္စျပဳ​ေတာ့မွ အ​ေျခအ​ေန ႐ုပ္လုံး​ေပၚလာတယ္။ ဒီ ဗီဒီယိုထြက္လာၿပီး အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးအေပၚ အက်ိဳးသက္​ေရာက္မႈ​ေတြကိုၾကည့္ရင္ ..
(၁) NLD ဖက္က ေပါင္းလကၡဏာ​ ေဆာင္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈအရရွိဆုံးပဲ။ သူ႔ပါတီကို​ေထာက္ခံသူ​ေတြ အခု တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အသံက်ယ္က်ယ္​ေလာင္​ေလာင္ ထြက္လာတယ္။ အႏုပညာရွင္ အခ်ိဳ႕ကပါ ဒီဗီဒီယိုကို ေဝဖန္ခံရ​ေတာ့ သူတို႔​ေနာက္ကအား​ေပးတဲ့ ပရိတ္သတ္​ေတြကိုပါ ေ႐ြး​ေကာက္ပြဲႏွစ္မွာ ႀကိဳတင္စုစည္း​ေပးလိုက္သလိုျဖစ္သြားတယ္။ ေနာက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာ ႏိုင္ငံ​ေရး​ေခါင္း​ေဆာင္ တစ္​ေယာက္ရဲ႕ လုံၿခဳံ​ေရးကို ေႏွာက္ယွက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္သို႔မဟုတ္ ပုံရိပ္ကို ျဖစ္​ေပၚ​ေစရင္ အဆိုပါ​ေခါင္း​ေဆာင္အ​ေပၚမွာ ၾကည္ညိဳမႈ က႐ုဏာ ျဖစ္​ေစတာ ထုံးစံပဲ။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၀) ရက္​ေန႔မွာ အ​​ေမရိကန္သမၼတ ေရဂင္ကို ေသနတ္သမား ဂြၽန္ ဟင္ကလီက မ​ေအာင္ျမင္​ေသာ လုပ္ႀကံမႈတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ရာမွာ လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕​ေတြက ကယ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုကို လူ​ေတြျမင္ခြင့္ရလိုက္တယ္။ ဒီဗီယိုမထြက္ခင္ သမၼတရဲ႕ ေထာက္ခံမႈစစ္တမ္း ၆၀% ရွိရာက​ေန ဗီဒီယိုထြက္လာၿပီး​ေတာ့ ၆၉% အထိခုန္တက္သြားတယ္။ ဒါက တကယ္ျဖစ္ခဲ့တာ၊ တကယ္မဟုတ္ဘဲ အႏုပညာလႈပ္ရွား ဖန္တီးမႈအ​ေနႏွင့္ သမၼတ ေလယာဥ္အပိုင္စီးတာတို႔၊ အိမ္ျဖဴ​ေတာ္ အသိမ္းခံရတာမ်ိဳး ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ရင္လည္း လက္ရွိသမၼတအတြက္ စည္း႐ုံး​ေရး အျမတ္ထြက္တာပဲ၊ ဒါ​ေၾကာင့္ ကလင္တန္လက္ထက္႐ိုက္တဲ့ Air Force One မွာ သမၼတဇာတ္႐ုပ္ကို ကလင္တန္တို႔ မိသားစုပုံမ်ိဳး႐ိုက္တာ၊ အိုဘားမားလက္ထက္က ဇာတ္လမ္းတြဲ 24 မွာ သမၼတ Wayne Palmer ကို အိုဘားမားႏွင့္ ႐ုပ္တူ​ေအာင္ ထည့္႐ိုက္တာေလ။
ဒါ ေတြ​ေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဒါ​ေၾကာင့္ သမၼတ​ေတြဟာ ေ႐ြး​ေကာက္ပြဲႏွစ္မွာ လုပ္ႀကံဖို႔ႀကိဳးစားခံရတဲ့ သူရဲ​ေကာင္း ဇတ္လမ္းမ်ိဳး သိပ္႐ိုက္​ေစခ်င္တာ။ အခုလည္း ဒီမွာ ဟို​​ေန႔က video ထြက္ၿပီးတဲ့​ေနာက္ NLD ေခါင္း​ေဆာင္ပိုင္း အတြက္ တကယ္လည္း စည္း႐ုံး​ေရး အ​ေထာက္အကူျဖစ္သြားတာပဲ။ ပထမပိုင္း အကြက္မွာ စီးပြား​ေရး ရပ္ဆိုင္းလို႔ ေအာက္​ေျခလူကတန္းစား​ေတြ ထိခိုက္တာမ်ိဳး႐ိုက္တာ​ေၾကာင့္ တကယ္ ခံစားရသူ​ေတြၾကားမွာ NLD ပုံရိပ္ကို အထိုက္အ​ေလ်ာက္ ထိခိုက္​ေစ​ေပမယ့္ ေနာက္ဆုံးမွာ က႐ုဏာအျပည့္ျပန္ရလို႔ အားလုံးၿခဳံၾကည့္ရင္ NLD အျမတ္အထြက္ဆုံးပဲ။ NLD က စီမံခန္႔ခြဲမႈလိုအပ္ခ်က္​ေၾကာင့္ သက္တန္းငါးႏွစ္အတြင္း အားမရစရာ ျဖစ္ခဲ့တာ​ေတြကို ေခါင္း​ေဆာင္ပုံရိပ္ႏွင့္ ျပန္ဆယ္ၿပီး အ​ေျခအ​ေန​ေကာင္းႏိုင္​ေသးတယ္ဆိုတဲ့သ​ေဘာ သိလိုက္ရတယ္
၂။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဖက္ကက်​ေတာ့ အဂြမ္းဆုံးျဖစ္သြားတာ၊ အစည္း​ေဝးမွာ NLD အမတ္မင္း​ေတြ​ေရာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး အမတ္မင္း​ေတြ​ေရာ တက္​ေရာက္​​ေဆြး​ေႏြး​ေပမယ့္ NLD အမတ္​ေတြကိုပဲ ပရိသတ္က သတိထားမိၾကတာ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို လူရာသြင္းၿပီး ထည့္ကို အ​ေျပာမခံရတာ ပထမ ဂြမ္းခ်က္၊ ေနာက္ဆုံး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဥကၠဌ ဦးသန္း​ေဌးပုံထည့္လိုက္တာကက်​ေတာ့ ….. အိုး ဘာ​ေျပာ​​ေကာင္းမလဲ။ ဤ​ေနရာ​ေတြ ေသးပန္းပါလို႔ ဆိုင္းဘုတ္ခ်ိတ္​ေပးလိုက္တာက် ေနတာပဲ၊ ဒီဗီဒီယိုကို မႀကိဳက္တဲ့သူ​ေတြက ယုန္​ေလးၿပီးရင္ မို႔မို႔ျမင့္​ေအာင္ ဒုတိယလိုက္ၿပီး ဆဲၾကလိမ့္မယ္လို႔ ထင္တာ ဦးသန္း​ေဌးက သူလည္း ဝင္မ႐ိုက္ရရွာဘဲ မမို႔ရဲ႕ ေနရာဝင္ယူၿပီး အဆဲခံ​ေပးသြားတာ။ လႈပ္ရွားၿပီး သ႐ုပ္​ေဆာင္စရာ​ေတာင္ မလိုဘူး။ ႐ုပ္​ေသ ဓါတ္ပုံ​ေလးႏွင့္ အဆဲခံသရဖူ ဝင္လုသြားတာ။ “ထသြားမွ အက်ိဳးမွန္းသိ” လို႔ဆိုရ​ေအာင္ကလည္း သူက ဖိုးပါခ်င္အျဖစ္ ဝင္သ႐ုပ္​ေဆာင္ ရတာလည္း မဟုတ္ဘဲ ပိဋကတ္ေတာ္ထဲပါတဲ့ ေလထဲလြင့္လာတဲ့ ဗီဒီယိုတည္းဟူ​​ေသာ မီးကြင္းက ေကာင္းကင္ပ်ံ​ေနတဲ့ က်ီးကန္းတည္းဟူ​ေသာ ခမ်ာ ဦးသန္း​ေဌး လည္ပင္းကို အကုသိုလ္အက်ိဳး​ေပးခ်ိန္မို႔ တည့္တည့္ႀကီး တက္စြပ္မိတာ။ ယုန္​ေလးကိုခ်စ္ၾကတဲ့၊ အား​ေပးၾကတဲ့ မိတ္​​ေဆြပရိသတ္​ေတြပင္လ်င္ အျခား႐ိုက္ခ်က္​ေတြကို ယုန္​ေလးဖက္က ဝင္ကာကြယ္​ေပးၾက​ေပမယ့္ ဦးသန္း​ေဌးပါထည့္လို႔ အ​ေျပာခံရတာကို​က်ေတာ့ ကာကြယ္​ေပးစရာ ဆင္​ေျခရွာမရခဲ့ဘူး။
ယုန္​ေလးက ဘယ္သူတိုက္တြန္းမႈမွ မပါဘဲ ႐ိုက္တယ္လို႔ ရွင္းလိုက္ၿပီ၊ တစ္​ေယာက္​ေယာက္ တိုက္တြန္းမႈမ်ားပါလို႔ တိုက္တြန္းသူက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးဖက္ကဆိုရင္​ေတာ့ ကိုယ့္​ေသတြင္းကိုတူးခဲ့ၾကတာပဲလို႔ ေတြးခဲ့မိတာ ယုန္​ေလးရွင္းလိုက္လို႔ မဟုတ္မွန္းသိရတာ​ေတာ္​ေသးတယ္။ အစကတည္းက ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကို ဆန္႔က်င္ဖက္​က သူခိုးပါတီလို႔ စြပ္စြဲ​ေနၾကတာ။ တကယ္​ေတာ့ ခိုးတဲ့သူေတြ အမ်ားအျပား ပါ​ေကာင္းပါ​ေပမယ္. တကယ္အရည္အခ်င္းျပည့္စုံသူ​ေတြလည္း အမ်ားႀကီးပါ။ သူတို႔​ေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ သူခိုးပုံရိပ္ကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ၊ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ပုံရိပ္ကိုပြဲထုတ္ရမွာ၊ ဒီပါတီလည္း အခု ဗီဒီယိုကလႈပ္ႏႈိးလိုက္လို႔ ကိုယ့္အျဖစ္ကိုယ္သိၾကဖို႔​ေကာင္းၿပီ၊ ဘယ္လိုပုံရိပ္မ်ိဳး​ေျပာင္းလဲ ေရွ႕တန္းတင္ရမယ္ဆိုတာ​ေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဆုံးျဖတ္ၾက​ေတာ့၊ ဒီအခ်ိန္ေတာင္ ေႏွာင္းလြန္းၿပီလားမသိ။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးက်​ေတာ့ သူတို႔အစိုးရ ငါးႏွစ္သက္တမ္းအတြင္း အထိုက္အ​​ေလ်ာက္လုပ္ျပႏိုင္ခဲ့တဲ့ အ​ေနအထား ကို​ေတာင္ ေခါင္း​ေဆာင္ပုံရိပ္ဂြမ္း​ေနမႈ​ေၾကာင့္ အ​ေတာ္ႀကီး႐ုန္းကန္ရဦးမွာ။
၃။ ေနာက္ဆုံး ႐ိုက္ခတ္မႈက အႏုပညာက႑။ သူ႔႐ိုက္ထားတာကို ႀကိဳက္လို႔ခ်ီးမြမ္းတာ၊ မႀကိဳက္လို႔ ေဝဖန္တာက သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္​ေတြရဲ႕ ေျပာပိုင္ခြင့္ လြတ္လပ္မႈ။ ဒါ​ေပမယ့္ ေတာ္​ေတာ္မ်က္လုံးျပဴးသြားမိတာက ဒီအထဲ ဝင္သ႐ုပ္​ေဆာင္၊ သီဆိုခဲ့တဲ့ ကေလး တစ္​ေယာက္၊ ႏွစ္​ေယာက္ဆီက တိုက္႐ိုက္ျပန္ၾကားရတာ။ သူတို႔​ေျပာတာက “လူေတြ စိတ္ဓာတ္ေတြမေကာင္းဘူး။ line ေပၚ မတင္ ခင္ ႐ုပ္ရွင္႐ုံမွာ အားလုံးစုၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ လက္ခုပ္ေတြဝိုင္းတီးၾကပီးေတာ့၊ အမွားဆိုပီးျဖစ္လာေတာ့မွ အခ်င္းခ်င္းေတာင္ျပန္က်ဳံးၾကတယ္ ” တဲ့။ အဲလို မတင္ခင္ အျမည့္ၾကည့္ခဲ့ဖူး​သူ​ေတြက ေနာက္မွ ျပန္​ေဖာင္းထုတဲ့အထဲပါတဲ့ သက္​ေသ​ေတြ ေပၚလာရင္ သူတို႔လည္း ဂြမ္းၿပီ​ေနာ္။ ဦးသန္း​ေဌး​ေရ.. အားမငယ္ပါႏွင့္။ ဂြမ္း​ေဖာ္ ဂြမ္းဖက္​ေတြ အဆဲခံသရဖူျပန္လုခ်င္လုသြားဦးမွာ။
အြန္လိုင္းမွသာတင္ဆက္ေတာ့မည့္ ႏွင္းဆီအၿငိမ့္online ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ
ည ၁၂ နာရီခွဲမှာ ထွက်ရှိမယ့် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းနှင့် ပတ်သတ်လို့ သိသင့်တာလေးများ
G fatt က နန်းစုကို မမုန်းပါဘူး ချစ်နေရက်နဲ့ စွန့်လွတ်လိုက်တာလို့ ပြောပြခဲ့တဲ့ ရဲတိုက်
မီးပြတ်နေလို့ ဖွင့်လို့မရတဲ့ ခြံဝန်းတံခါးကြီးကို လက်ဗလာနဲ့ ဆွဲဖြုတ်ပစ်လိုက်တဲ့ Dwayne Johnson
လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ Positive လူနာတွေရှိရာ ရိုးမဆောင်ကို ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့ပြီးပြန်လည် မျှဝေပေးလာတဲ့ ချစ်သုဝေ
သွေးသားမတော်စပ်ပေမယ့် အရေးကြုံတဲ့အခါမှာ အကူအညီပေးတဲ့ ယောင်းမလောင်းလျာလေး ရီရီပွင့်ဖြူကို ကျေးဇူးတင်စကားပြောလာတဲ့ နန္ဒာလှိုင်
အိမ်သား (၄) ယောက်နဲ့အတူတူ POSITIVE ဖြစ်ပြီး COVID -19 ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်ကို အသိပေးလာတဲ့ မောင်
မွေးနေ့အလှူအဖြစ် လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ လှူဒါန်းမှုပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ခင်ဝင့်ဝါ